नागरिक लगानी कोषको शेयर मूल्य समायोजन – Ramro Samachar
नागरिक लगानी कोषको शेयर मूल्य समायोजन
By राम्रो समाचार	 On Jun 24, 2020 219 0
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा नागरिक लगानी कोष Citizen Investment Trust को शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । कम्पनीको २२ प्रतिशत बोनसमा मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजनपछि कम्पनीको मूल्य १८ सय ८२ कायम भएको छ ।
कोषले असार २० गते शनिवार नयाँ बानेश्वर स्थित कोषको पुरानो भवनमा सभा आह्वान गरेको छ । सभामा लाभांश र हकप्रद लगायतका प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक बर्ष ७५/७६ को मुनाफाबाट २२ प्रतिशत बोनस शेयर र १.१६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । साधारणसभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा वितरण हुने छ ।
त्यस्तै कोषले बोनसपछि हकप्रद वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । कोषले १:०.८२८४ को अनुपातमा ८२.८४ प्रतिशत हकप्रद निष्काशनको प्रस्ताव गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने छ । कोषले साधारणसभा प्रयोजनको लागि असार १० गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । असार ९ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् ।
२०७७ सालमा कुन पर्व कति गते पर्छ हेर्नुहोस्……….
नबिलका कर्मचारीलाई ७ महिनाको तलब बराबरको बोनस…
ज्योति लाइफको आइपीओ शुक्रबारदेखि खुला : लगानी गर्नुअघि हेरौं कस्तो छ कम्पनी….
Greenlife Hydropower LTD को साधारण सेयर IPO निष्कासन हुने भयको छ ।
आठ अर्बको सर्वाधिक ठूलो आइपीओ माघ २ गतेदेखि, कति पर्छ ……
हिमालयन डिष्टिलरीले शतप्रतिशत लाभांश बाँड्ने…